यस्ताे छ नायिकाकाे दसै‌ं याेजना |
यस्ताे छ नायिकाकाे दसै‌ं याेजना
प्रकाशित मिति :2015-10-17 11:13:55
चाडपर्वका नेपाली कलाकारहरूलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्छ । खासगरि विदेशमा बस्ने नेपालीले यस्तो बेला उनीहरूलाई बिभिन्न प्रस्तूतिका लागि विदेशमा निम्ता गर्छन् । कलाकारका लागि पनि यो अलि आम्दानी गर्ने बेला हो । हिन्दुहरूको महान चाड विजया दशमी नजिँकिदै गर्दा कलाकारले दसैं मनाउने आ आफ्नो योजना बनाएका छन् ।
महिला शक्तिको पुजा दशैं : रेखा थापा
दसैं मलाई मन पर्ने पर्व हो । असत्यमाथि सत्य र आसूरी शक्तिमाथि दैवि शक्तिको विजयका रूपमा विजया दशमीलाई लिइन्छ । विजयादशमीका दिन आफ्नो मान्यजनबाट टिका ग्रहण गर्ने ,पहेँलो जमरा लगाएर ठुला बडाको अर्शिवाद लिने राम्रो पक्ष हो । दसैंको मन पर्ने अर्को पक्ष भनेको स्त्री शक्ति को पूजा हो । अझै पनि पितृसत्तामक सोच हावी छ चाहे त्यो पुरुष होस् या महिला । ममा पनि छ । हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा विभेद छैन भने तापनि हिंसा छ , विभेद छ । मैले ‘काली ’,‘हिम्मतवाली ’जस्ता नारी प्रधान चलचित्र बनाए र त्यसलाई धेरै दर्शकले मन पराए । चलचित्रको व्यापार पनि राम्रो भयो तर म महिला भएकै कारण जुन रुपमा मेरो कामको मूल्याङकन हुनुपर्ने हो, हुन सकेन । सबैले हल्का रुपमा लिए । त्यही ठाँउ कुनै नायक भएको भए, उनको वाहवाह र तारिफ हुन्थ्यो । त्यसैले महिला हिंसा हरेक क्षेत्र, हरेक ठाउँमा छ । अबका महिलाले मौनता तोड्नुपर्छ , हिंसाविरुद्ध लड्नुपर्छ । हरेक घरमा प्रत्येक महिलामा माता दुर्गाको शक्ति छ । त्यो शक्ति नचिनेर हामी पछि परेका हाैं । देशमा संविधान पनि बनिसकेको छ , दसैंले नेताहरूलाई सद्बुद्धी दिउन् । देशले भोगिरहेको समस्याको समाधान होस् । दसैंको शुभकामना !
दशैंका बेला असरन र न्युरोड घुम्न मन पर्छ : प्रियंका कार्की
यसपाली दसैंमा म नेपाल बाहिर हुन्छु । मेरो चलचित्र वडा नं ६ को प्रिमियर कार्यक्रमका लागि बेलायत जाँदैछु । खुल्ला सडक, ट्राफिकको कमी देख्दा मलाई दसैं आएको महसुस हुन्छ । मलाई यो बेला असन र न्युरोड घुम्न मनपर्छ । मेरो लागि हरेक पर्व महत्वपूर्ण छ, त्यसमा पनि दसैं अझ मनपर्छ । दसैंमा पुराना दिनहरू बिर्सिएर नयाँ कामको सुरुवात गर्नुका साथै मान्यजनबाट टीका, आर्शिवाद थाप्नु निकै मनपर्छ । दसैं मनाउनका लागि हामीले मासु नै खानुपर्छ भनेर त शास्त्रमा लेखेको छैन । दसैं हाम्रो संस्कार र आफ्नै महत्व बोकेको संस्कृति पनि हो । दसैंको नाममा हुने बलिप्रथा मन पर्दैन । बलिप्रथाको अन्त्य हुनुपर्छ । ऋतुहरूको राजा बसन्तपछिको राम्रो समय शरद ऋतुमा वातावरण मनोरम हुन्छ । धानका बाला जताजतै झुल्छन् । दसैंको समयमा एउटा छुट्टै उमङ्ग छाएको हुन्छ सबैमा । वर्षभरी जिन्दगीलाई सफल बनाउन जुटेका ती मनहरू नयाँ जोस र जाँगरका साथ दसैं मनाउने ठूलो उमङ्गसँगै घर फर्कन्छन् । यो दसैंको सुन्दर पक्ष हो ।
दसैंले महिलाको उच्च स्थानलाई प्रष्ट्याउँछ : बेनिशा हमाल
अघिल्लो दसैंमा घर जान पाइनँ , चलचित्रको सुटिङमा व्यस्त थिएँ । यसपटक भने म मेरो घर चितवन जान्छु । दसैंको रौनक छुट्टै हुन्छ । पारिवारिक भेटघाटले यो पर्वको महत्व अझ बढाएको छ । परिवारमा आफूभन्दा ठूलाबडा, तथा मान्यजनको हातबाट नवदुर्गा भवानीको टीका, जमरा तथा प्रसाद थापी आशीर्वाद लिन मलाई मनपर्छ । परापूर्वकालदेखि नारी शाक्तिको प्रतिक दुर्गा भवानीको पूजा दशंैमा हुन्छ । यस पराम्पराले हाम्रो समाज महिलाको महत्व र उच्च स्थानलाई प्रष्टाँयाउछ । नारी जननी हुन्, सृष्टिकर्ता हुन् र आवश्यक परेको खण्डमा महाकाली बनी नकारात्मकताको विनाश पनि गर्छिन् । देशमा संविधान बनेको छ । देशमा शान्ति छाओस्, सकारात्मक सोच र खोज हरेकको नेपालीको मनको पलाओस् , दसैंको शुभकामना !!
मातृशक्तिको पूजा गर्ने गौरवशाली संस्कृति : केकी अधिकारी
दसैं, यो चाड मनाउनुको आफ्नै विशेषता, धार्मिक तथा सामाजिक महत्व रहेको छ । असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीकको रुपमा यो पर्वलाई लिइन्छ । घटस्थापनाको दिन म बिभिन्न शक्तिपीठहरूमा गई पुजा अर्चना गर्छु । मलाई धर्मप्रति आस्था छ । यस वर्ष म काठमाडौंमा हुन्छु । अहिले मेरो चलचित्र ‘भाग सानी भाग’ को तयारीमा व्यस्त छु । आफ्ना मान्यजनबाट टीका तथा जमरा लगाई हर्षोल्लासका साथ दसैं मनाउनु पनि राम्रो पक्ष हो दसैंको । यो मातृ शतिmको पुजा गर्ने गौरवशाली सँस्कृति पनि हो । दसैंको नाममा थुप्रै विकृति पनि भित्रिएका छन् । दसैं धुमधामसँग मनाउन ऋण लिने, झैझगडा गर्ने, जाँड, रक्सी खाने चलन भने कुनै पनि हालतमा राम्रो हुन सक्दैन । यदि हामीले दसैंमा तडकभडक मिल्काउन सकेनौं भने गरिब र धनीबीच खाडल बढ्नेछ । दसैंसँग भित्रिएका विकृति हटाउन जरुरी छ । दसैं जोगाउनु पर्छ, हिन्दुहरूको मात्र दसैं होइन, यो नेपालीको हो । हुनेखानेहरूलाई सधैंको दसैं छँदैछ । हुँदा खानेहरूका लागि पनि दसैं साच्चिकै दसैं बन्न सकोस् । दसैं राष्ट्रिय एकताको कारण बनोस् । हाम्रो राम्रो संविधान बनेको छ र देशमा सर्बत्र शान्ति छाओस् विजया दशमीको यही शुभकामना सम्पूर्ण नेपालीलाई !
तामझाम गरेर दसैं मान्ने मान्यताको अन्त्य गरौं : अनु शाह
सँस्कृति र सभ्यता भनेको मानिसका आँखा हुन् । हाम्रो संस्कृति नै हाम्रो पहिचान हो । महान चाड दसैंको आशीर्वाद थाप्ने संस्कार मलाई मनपर्छ । बाल्यकालमा निधारभरी रातो टीका, जमरा लगाई म खुब पीङ खेल्थें । मलाई ती दिनहरू अझै याद आइरहन्छ । दसैं टुटे, फुटेका मनहरू जोड्ने पर्व पनि हो । यो बेला शुभकामना आदानप्रदान मार्फत सम्बन्धलाई जोड्ने काम हुन्छ । पुराना, तीता घटनाहरू बिर्सिएर फेरि नयाँ सम्बन्धको सुरुवात गर्ने मौकाको रुपमा म दसैंलाई लिन्छु । वर्षाैं भेटघाट नभएका आफन्तजनँंगको भेटघाट , माया शुभकामना साटासाटले यो बेला समबन्धलाई अझ गहिरो बनाउन मद्दत गरेको हुन्छ । हाम्रो जीवनशैली अनुरूपको दसैं मानौं, तामझाम गरेर दसैं मान्नुपर्छ भन्ने मान्यताको अन्त्य गरौं । यसरी दसैं पर्वले हिजैदेखि दिएका सन्देशहरू जीवित राखौं । आँउदो पुस्तालाई जस्तो थियो त्यस्तै हस्तान्तरण गरौं भन्ने मान्यता राख्दा उचित होला !
प्रकाशित मिति: २०७२ असाेज ३० गते शनिवार